GvSIG १.१० मा एक नजर - ​​Geofumadas
अक्टुबर, 2010 जियोस्पाटियल - जीआईएस, GvSIG, पहिलो प्रभाव
केहि दिन पछि gvSIG 1.9 traversing, मेरो लागि अपमानिता त्रुटिहरू त्यो संस्करण र अन्य जोखिमहरूआज म gvSIG मुद्दामा फर्कें। लामो समयदेखि यस सफ्टवेयरलाई नछोउनु मेरो लागि फलदायी छ किनभने यो नयाँ संस्करण खोल्दा र त्यससंग मैले फोटोको साथ तुलना गर्नु एकदम रोचक छ।
एक प्राविधिक कविको जीवन सजिलो छैन, दायित्व बाहिर आवश्यकता सफ्टवेयर समीक्षा, आवश्यकता वा जोश धैर्यको आवश्यकता छ; स्वामित्व प्रायोजन गर्ने स्वामित्व सफ्टवेयरको साथ विडम्बना प्रयोग स्वीकार्य छ, तर खुला स्रोत पहलको प्रमोटरहरू बुझ्नेले मलाई अधिक खर्च गरेको छ। कुञ्जीपाटी पछाडिको पछाडि हुनुले हामीलाई स्वतन्त्रताका साथ क्षणिक टोनिकको साथ प्रश्न गर्ने कलामा कलात्मक व्यंग्यदेखि लिएर दुई यहूदीहरूको सामान्य दृष्टिकोणमा झगडा गर्दा प्रायः तीन धारणाको समानतासम्म भ्रष्टाचार गर्न सक्छ।
मैले ईमानदारीसाथ स्वीकार गर्नै पर्छ कि मैले यो संस्करणको साथ देखेको प्रगतिले मलाई धेरै सन्तुष्ट गर्यो। जाभा इञ्जिनको संस्करण १. on मा चलाउँदै, भिस्टा / विन्डोज with को साथ उपयुक्त र अन्तिम प्रोजेक्टको साथ पछिल्लो पटक… प्रगति अवश्य पनि सुस्पष्ट छ। सुरु गर्न, अन्तर्क्रिया छिटो, सफा देखिन्छ; उपयोगितामा एक उत्तम काम यो जाभा भए पनि र म अझै लिनक्समा सर्दै छैन। पक्कै पनि मेरो प्रशंसाको यो १ minutes मिनेट पछाडि हजारौं घण्टा कोडमा रूपान्तरण गरिएको छ, केवल प्रोग्रामरमा मात्र होइन भ्रूण स्थिति, तर एक पूर्ण समुदाय जसले परीक्षणमा शर्त लगाएको छ, सूचीलाई जवाफ दिन, कन्फर्म बढाउन र अन्ततः यो उपकरण लिनको लागि सबैभन्दा टाढाको र व्यवस्थित र पथित मार्गहरूमा एक साथ।
यस अध्यायको अन्त्यमा, gvSIG को साथ, हामी सबैको आशा के हो जुन एक उपकरण हो जुन समयको साथ दिगो हुन सक्छ, चिट्ठीको साथ हाम्रो पहलको उत्पादन that, जुन हामी कुनै पनि नगरपालिकालाई ग्यारेन्टीको साथ प्रस्ताव गर्न सक्छौं कि यो मर्नेछैन जब कि पैसाको लागि अब उसले यो सहन सकेको छ। खास गरी यो रणनीतिक लडाईका लागि ESRI, AutoDesk, Intergraph र Bentley एक पटक यो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता (त्यो धेरै मा पहिले नै छ) वा त्यो सामान्यता भनेर हामीले शुरुमा देख्यौं (र के यो रिवर्स गर्न लागत छ) नि: शुल्क सफ्टवेयर को लागी कम प्रतिस्पर्धा र यसको स्थिरता मा अनिश्चित विचार को लागी।
तर हे, हल्याण्डको आधा खुट्टाको साथ, मसँग रोमान्स हुन यति धेरै समय बाँकी छैन र मेरो पुरानो सम्झना सधैं फलदायी हुँदैन। पहिलो रेखामा मेरो ध्यान के खिचेको थियो हेरौं।
अघिल्लो पटकको विपरित, प्रक्रियामा मैले जाभा भर्चुअल मेसिन र भाषा छनौट गर्नुपर्‍यो, जुन यो जस्तो हुनुपर्दछ। बाँकी, एक निरन्तर कदम।
यो मा स्थापित गरिएको छ:
«C: कार्यक्रम फाइल gvSIG_1.10_RC1bingvSIG.exe»
म अघिल्लो संस्करण संग असंगति देख्दिन। तर यो हेरेपछि, यो आरसी हो भनेर पनि थाहा भए पछि, म पुरानो संस्करणहरू राख्नुपर्ने कुनै कारण भेट्टाउँदिन।
GvSIG figurine सँग डेस्कटपमा एक थप आइकन पनि हामीलाई भ्रमित गर्नेछ।
त्यसका लागि तपाईले प्रोग्राम फाइल फोल्डरमा जानुपर्नेछ र त्यहाँबाट स्थापना हटाउनुपर्नेछ। त्यहाँ जहिले पनि एक फोल्डर नाम दिइन्छ अस्थापनाकर्ता जडान स्थापना हटाउन एक नियमित समावेश गर्दछ। म यसलाई यहाँबाट गर्न सिफारिस गर्दछु, किनकि कन्ट्रोल प्यानल सब भन्दा चाँडो मार्ग नहुन सक्छ वा यदि हामी रेजिस्ट्रीसँग शरारत भएका छौं भने स्थापित भएका सबै संस्करणहरू देख्न सम्भव नहुन सक्छ।
विस्तृत समीक्षा गर्न मसँग अहिले धेरै समय छैन। तर तपाईं संस्करणको समाचार हेर्न सक्नुहुनेछ अनलोड गर्दै क्षेत्र; अबको लागि म तीन उपन्यासहरु मा ध्यान दिनेछु कि म रोचक छ।
स्थान नक्शा। यो ठूलो अग्रिम भएको छ, दृश्यको विभिन्न मार्गहरु र कम संग अन्तरक्रियात्मक रहेको छ त्रुटिहरू। मैले यो uDig र QGis भन्दा धेरै दिन देखेको वा गरेको भन्दा पनि अधिक दृढ देख्दछु।
बायाँ माउस बटनको साथ जुम गरेर यससँग अन्तर्क्रिया गर्न सम्भव छ। के बाकसमा चयन गरिएको छ स्क्रिनमा प्रदर्शित हुनेछ। त्यसो भए दायाँ बटनको साथ, तपाईले बाकस तान्न सक्नुहुनेछ, साइज सुरक्षित गर्दै, र यदि तपाईंले क्लिक गर्नुभयो भने उही साइजको विन्डो त्यहाँ राख्नेछ।
बटनको पहियाको साथ यो जुमलाई समर्थन गर्दछ, यद्यपि मैले फिर्ता जाने बाटो पाएको छैन सीमा मूल निश्चित गर्नुहोस् त्यहाँ म्यानुअलमा केहि हुनुपर्दछ, जुन पोइन्ट हो जहाँ यो सुरु हुनुपर्दछ।
यस स्थान नक्सामा तहहरूको कन्फिगरेसन "हेर्नुहोस्> लोकेटर कन्फिगर गर्नुहोस्" मा गरिन्छ।
द्रुत सूचना यो प्रकारको तालिका हो टूलटिप, जसले फिल्डमा सूचक राख्दा छनौट गरिएका क्षेत्रहरू प्रदर्शन गर्दछ। क्षेत्र, परिधि र लम्बाइको रूपमा गणना गरिएको डाटा (भण्डारण नगरिएको) सहित क्षेत्र र फिल्डहरू छनौट गर्न तपाईंलाई अनुमति दिन्छ।
मैले त्यो सारा परिवर्तन कसरी गर्ने भनेर देखेको छैन गुलाबी तर पक्कै पनि तपाईं सक्नुहुन्छ, र यो सुरुमा अलिक ढिलो देखिन्छ यदि तपाईंले धेरै क्षेत्रहरू छान्नुभयो भने। मसँग त्यस र withको कुनै कम्प्लेक्स छैन तर म चियापानकोस द्वारा चिन्तित हुन मन पराउँदिन - र, यो पनि सम्भव छ कि AcerAspireOne यो GIS गर्न सबै भन्दा तेज मेशिन होइन।
नेभिगेसन तालिका। मैले देखेको सबैभन्दा आकर्षक ऊसँग आधा परिचित भइसकेको थियो त्रुटिहरू कि ती वितरण सूची मा उल्लेख, तर यो देखेर म सन्तुष्ट छु। यो सँग भौगोलिकद्वारा प्रयोग गरिएकोसँग मिल्दो प्रकार्य हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्, अर्को र विकल्पहरूमा जान बटनहरूको साथ वस्तुको विशेषताहरूको तालिका खडा गर्दछ ताकि वस्तुको जुम वा चयन गतिशील हुन्छ। यहाँ स्थान नक्शा आकर्षक हुन्छ।
तल्लो बटनहरूको साथ धेरै ध्यान दिनुहोस्, किनकि तपाईं रेकर्डहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ, डाटालाई एक वस्तुबाट अर्कोमा प्रतिलिपि गर्न र बचत गर्न सक्नुहुन्छ। यो विन्डो तोकिएको उचाइको हुन सक्दैन कि भनेर पनि हेर्न आवश्यक हुन्छ, किनकि यो ठाउँको अपव्यय्य छ जब त्यहाँ थोरै डाटा हुन्छ; मैले प्रयास गरेन तर यदि तपाईसँग के बढी फिट छ भने मैले बारको मान्दछु स्क्रोल गर्नुहोस्। मैले परीक्षणको लागि एउटा नगरपालिका चयन गरें र यसलाई लोड गरें, त्यसपछि विन्डो आधा हाँगिएको थियोaद्वारा null.point.error.
त्यसपछि हामी अन्य पिनहरू प्रयास गर्दछौं जुन यस संस्करणले ल्याउँछ।
संक्षिप्तमा, यो धेरै मजबूत संस्करण जस्तो देखिन्छ, धेरै परिवर्तनहरू छन् जुन समुदायले भनेको छ। मँ देख्छु कि त्यहाँ धेरै परीक्षणहरू छन्, जुन मैले देखेको छु कि बगहरू जो मैले वितरण सूचीमा पहिले नै सुनेको छु र निश्चित रूपमा ती पृष्ठभूमिमा चलिरहेका प्रक्रियाहरूका लागि मेरो थोरै धैर्यको कारण छन्।
यससँग अझै पनि बलियो चुनौतीहरू छन्
rsion, प्राय: राम्रोको लागि। पहिले नै दिनहरुमा अमेरिकी महाद्वीप उनीहरू कडा देखिन्छन् जस्तो देखिन्छ, तर हामीले यसमा अधिक राख्नुपर्नेछ, खास गरी बाह्य सहयोग परियोजनाहरूसँग। युरोपका लागि अन्य रणनीतिहरू काम गर्दछन्, तर पोखरीको यस पक्षको लागि यो मूल्यवान बीज हुनसक्दछ जुन विस्फोटक रूपमा अंकुरण गर्न सक्दछ। धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा सहयोग प्रोजेक्टहरू छन् जुन युरोपियन युनियनको कोष वा जर्मनी, हल्याण्ड, फिनल्याण्ड, स्पेनको द्विपक्षीय कोषको साथ सब भन्दा बलियो कुरा उल्लेख छ। यसका साथै युरोपेली कम्पनीहरू, एनजीओ वा नगरपालिकाको राम्रो नाकले काउन्सिल, स्वायत्त समुदाय वा नगर परिषदको साथ सीधै ब्यवस्थित सहयोग परियोजनाहरू छन्। धेरै जसो परियोजनाहरूमा त्यहाँ क्रस-कटिंग कम्पोनेन्टहरू छन् जस्तै वातावरण, सम्पदा, भेद्यता, मौसम परिवर्तन, पारदर्शिता पोर्टलहरू, इत्यादि। जसले डेस्कटप र वेब म्यापि products उत्पादनहरू समावेश गर्दछ।
यो खराब हुने छैन यदि तपाइँ त्यस स्थानतिर बढी सामजिक बनाउँन सक्नुहुन्छ, किनकि हितग्राहीहरूले प्रदान गरिएको सफ्टवेयरलाई स्वीकार गर्नेछन् र यसलाई म्यानुअलहरू र प्रशिक्षणको साथ छोडेर यसलाई राख्नेछन्। यदि लाइसेन्स लागतलाई न्यूनतम बनाइन्छ र लामो अवधिमा प्रशिक्षित मानव पूंजीको दिगोपनले जीभएसआईजीको प्रसारलाई असर गर्छ भने एक किसिमको शिक्षाविद् र निजी क्षेत्रले भूमि प्रयोग योजनामा ​​सेवा प्रदान गर्ने निजी क्षेत्रबाट विनियोजित हुनुपर्दछ। यदि तपाईं नि: शुल्क सफ्टवेयरमा माइग्रेसनका लागि नीतिहरू प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ ... यति उत्तम।
त्यहाँ एउटा रोचक पहल थियो gvSIG र सहयोग, हुनसक्छ तपाई यसलाई पुन: जीवनसाथीमा जोड दिन सक्नुहुन्छ। को systemmatiization मा लगानी अनुभवहरू र प्रसार एक उत्तम हो जुन संघ सही तरिकाले गरिरहेको छ जस्तो देखिन्छ। राम्रो छ, र यसले स्थिरतामा जोड दिनुपर्दछ जुन सामूहिक मुद्दाबाट आउँदछ, किनकि तेस्रो पक्षहरूको जवाफले पहिले नै गरिएको प्रगतिलाई सुदृढ पार्छ।
भन्नु पर्दैन, भर्खरको क्याड ढाँचाका लागि समर्थन सामेल छ, त्यो हतियार हो जुन स्वामित्व सफ्टवेयरले राख्नेछ। तर यो केटाहरूलाई समर्थन लायक हुनेछ पोर्टेबल जीआईएस यस संस्करणलाई चाँडै समावेश गर्न किनकि तिनीहरू १.१ सँग छोटो भएका छन्। हामी यस बर्षको सम्मेलनको लागि तत्पर छौं, हामी पक्कै त्यहाँ बढी खबर जान्ने छौं।
यहाँबाट तपाईं gvSIG 1.10 डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो बर्ड फ्लू CAD / जीआईएस प्रयोगकर्ताहरूको लागि पीसी हटाउन हुनेछ?
अर्को पोस्ट एम्स्टर्डम र थपअर्को »
Rep जवाफ "gvSIG १.१० मा हेर्नुहोस्"
वास्तवमा, कार्टोलाबबाट हामी पानी परियोजनामा ​​सहयोग गर्दैछौं जुन एनजीओ ईन्जेनिअस सिन फ्रन्टेरसको होन्डुरासमा छ। हामीसँग एक वेबसाइट छ जहाँ gvSIG Fonsagua अनुप्रयोगलाई केहि राम्रोसँग व्याख्या गरिएको छ जसमा हामी भविष्यमा काम जारी राख्ने आशा गर्दछौं।
योगदान फ्रान्सिस्को को लागी धन्यवाद, तपाईले दक्षिणी होन्डुरसमा एउटा काम गर्नुभयो भनेर जान्न रोचक। हामी हेरौं कि एक दिन हामी समूहसँग सहमत भयौं र हामीले टेगुसिगाल्पामा क्यापुचिनो राख्यौं।
र साँच्चै, मैले एक चयन रेकर्ड मेट्दा त्रुटि भयो।
म दूरीलाई नमस्कार गर्छु।
म आफ्नो विश्लेषण सहमत, gvSIG apace बढ्नु र परियोजना को स्थिरता को खुट्टा को रूपमा समुदायको विचार गर्न सुरु जो छ एक कार्यक्रम छ।
वास्तवमा, नेभिगेसन टेबल कार्लोबाबाट मेरा साथीहरू द्वारा विकसित समुदायबाट एक विस्तार हो।
त्रुटिले तपाईंलाई दिनेछ जुन हामी सोच्दछौं कि तपाईले चयन गर्नु भएको बेला मेट्न सम्बन्धित छ वा केहि चयन गरिएको छ। हामी विश्वास गर्छौं कि एक्सटेन्सनको विकासमा भएका संस्करणहरूमा कुनै पनि तरिकाले हल गरिएको छ भने तपाईले हामीलाई बग र gvSIG लग फाइल पठाउन सक्नुहुनेछ, बगट्रक्टर ओएसर मार्फत, मेलिङ सूचिहरू वा मेरो आफ्नै मेलबाट।